Madhokotera 77 akadzingwa mabasa | Kwayedza
Madhokotera 77 akadzingwa mabasa
08 Nov, 2019 - 00:11	 2019-11-07T13:48:31+00:00 2019-11-08T00:04:55+00:00 0 Views
Cde Mutsvangwa (vechipiri kubva kurudyi) vaine gurukota rezvevashandi nekubatsirwa kwevanoshaya, Dr Sekai Nzenza, (kuruboshwe), gurukota rezvekufambisa nekusimudzirwa kwezvivakwa, Cde Joel Biggie Matiza naChief Secretary to the President and Cabinet, Dr Misheck Sibanda apo vaipindura mibvunzo kubva kuvatori venhau paMunhumutapa Building, muHarare nemusi weChipiri chino. — Mufananidzo naKudakwashe Hunda.
Paidamoyo Chipunza naFarirai Machivenyika
HURUMENDE inoti iri mubishi kugadzirisa mamiriro ezvinhu muzvipatara zvinoshandiswa neveruzhinji kuti zvishande zvakanaka zvichitevera kudzingwa mabasa kwemachiremba 77 avo vairamwa basa zvisiri pamutemo.
Izvi zvakaziviswa negurukota rezvekuburitswa kwemashoko nenhepfenyuro, Cde Monica Mutsvangwa, nemusi weChipiri svondo rino apo vaitaura kuvatori venhau mushure memusangano wedare Cabinet.
“Cabinet yaziviswa negurukota rezveutano nekurerwa kwevana (Dr Obadiah Moyo) kuti kuramwa basa kwavanachiremba kwadarika mazuva 63. Izvi zvava kuita kuti vanhu vasakwanise kurapwa muzvipatara. Zviri kuwedzerwa zvakare nanamukoti vekanzuru yeHarare avo vakamira basa vachiti havana zvekushandisa zvakakwana,” vanodaro.
Cde Mutsvangwa vanoti vanachiremba vakadaidzwa kuti vazotsanangura zvikonzero zvekuramwa kwavo basa neHealth Services Board (HSB) musi wa1 Mbudzi zvinova zvakazoita kuti 77 vavo vamiswe basa.
Vanoti pari kutorwa matanho ekuti zvipatara zvitange kushanda nemazvo. Dr Moyo vanotsinhira vachiti vari kutsvaga nzira dzekuti zvipatara zvikwanise kubatsira varwere. “Tiri kutora matanho ekuti tipe rubatsiro rwemhando yepamusoro kuzvipatara. Ndizvo zvandingakwanisa kutaura panguva ino. Tinofanira kubatsira veruzhinji pakugadziriswa kwezvinhu uye pozivikanwa kuti ndevapi vanoda kushanda nevasingadi.
“Pari zvino mamiriro akaita zvinhu ndeekuti hapana vanachiremba vari kuenda kumabasa kunze kwevari kubatsira panenge pachida rubatsiro nekukasira,” vanodaro Dr Moyo.
Sachigaro weHSB, Dr Paulinus Sikosana vanotsinhira kudzingwa mabasa kwemachiremba uku.
Vanoti vanachiremba ava vakadzingwa mabasa pachitevedzwa mutemo weSection 4 weLabour (National Employment Code of Conduct), Regulations, Statutory Instrument 15 of 2006 (the Code).
“Vanachiremba 77, kubva pahuwandu hwe80, vakabatwa nemhosva yekusauya kubasa vasina kupihwa mvumo yekuzorora zviri pamutemo uye pasina zvikonzero zvine musoro zvekusauya kubasa kubva pamazuva mashanu kana kudarika,” vanodaro Dr Sikosana.
Vanoti vacharamba vachinzwa zvikonzero zvekusauya kubasa kwanachiremba izvo zviri kutarisirwa kupedziswa nemusi wa15 Mbudzi. Kuramwa basa kwemachiremba kwakanzi hakusi pamutemo nedare reLabour Court pakutanga kwemwedzi wapfuura uye vakanzi vadzokere kumabasa mukati memaawa 48 asi havana kuzvitevedza.